Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Guam » Atkins Kroll wuxuu ku biirayaa Barnaamijka Ballanqaadka Håfa Adai
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Wararka Guam • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Ballanka Guam Håfa Adai
Xafiiska Booqashooyinka Guam (GVB) ayaa ku dhawaaqay in Atkins Kroll Inc. uu galabta ballanqaadkii Håfa Adai (HAP) ku qabtay Qolka Bandhigga AK ee Tamuning.
Ballan -qaadku wuxuu xoojinayaa ballan -qaadkii GVB ee ahaa inuu dhaxalkiisa sii noolaan doono ururka dhexdiisa.
AK Showroom wuxuu noqon doonaa qayb muhiim ah oo ka caawisa dadka deggan jasiiradda iyo booqdayaasha inay gaaraan halka ay u baahan yihiin inay aadaan.
Xafladda saxiixa ayaa calaamad u ah ballanqaadka lagu ilaalinayo luqadda, dhaqanka, iyo hiddaha Guam.
“Annaga oo ah shirkadda Guam ee ugu da’da weyn, waxaan si qoto dheer uga go’an nahay ilaalinta luqadda, dhaqanka, iyo hiddaha jasiiradda. Qaadashada ballanqaadkan ayaa sii xoojineysa ballanqaadkeenii ahaa inaan dhaxalkayaga ku sii noolaan doonno ururkeenna oo dhan, ayuu yiri Madaxweynaha AK Wendi Herring. “Markay jasiiraddeennu u jihaysanayso dib -u -soo -kabashada dhaqaalaha, waxaan rabnaa inay bulshadeennu ogaato inaan halkaan u joogi doonno tallaabo kasta oo jidka ah sidii aan ahaan jirnay 107kii sano ee la soo dhaafay. AK wuxuu halkan u joogaa Guam halkaanna waa nolol, ”ayuu raaciyay Herring.
"Waan ku faraxsanahay inaan AK ku soo dhaweyno qoyska Håfa Adai Pledge," ayuu yiri GVB Agaasimaha Cilmi -baarista Dalxiiska Nico Fujikawa. “Waxay qayb muhiim ah ka yihiin caawinta dadka deggan jasiiradda iyo booqdayaasha inay gaaraan halka ay u baahan yihiin inay aadaan. Barnaamijkan ballanqaadku wuxuu dhaafsiisan yahay salaanta fudud ee Håfa Adai. Waxay abuurtaa qiyamka asaasiga ah ee waxa sameeya Guam gaar u ah dhaqannadaada maalinlaha ah. ”
Xafladda saxiixa ayaa ku soo gabagabowday nashaad fudud oo loogu talagalay kuwii ka soo qeybgalay.
Atkins Kroll, oo ah shirkad Inchcape, ayaa ah hormuudka qaybiyaha gawaarida ee Guam, Waqooyiga Mariana Islands iyo Micronesia oo awood u siineysa inay siiso badeecooyin iyo adeegyo kala duwan oo gobolka ah. Atkins Kroll waa shirkadda Guam ee ugu da'da weyn oo la aasaasay 1914 waxayna matalaysaa Toyota, Lexus, BMW, Chevrolet, Toyota Rent A Car, ACE Rent a Car, iyo AC Delco magacyada.
Balanqaadka Håfa Adai waa udub -dhexaadka barnaamijka sumadaynta bulshada maxalliga ah ee Xafiiska Booqdayaasha Guam. Barnaamijka Ballanqaadka Håfa Adai ayaa si isdaba joog ah ugu koray tirada ka qaybgalayaasha iyo sidoo kale waxa ku jira ballanqaadyada shaqsiyeed tan iyo markii la aasaasay 2009. In ka badan 940 meheradood oo gaar loo leeyahay, wakaaladaha dawladda, kuwa aan macaash doonka ahayn, ururada, iyo carruurta dugsiyada deegaanka ayaa qaatay ballanqaadka in ka badan 44,000 shaqsi gudaha iyo dibaddaba.